Rikoooo.com - TDS 737 latest
TDS 737 kacha ọhụrụ
Jikọtara: 27 Ọgọst 2015, 12:06
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Uchechi 38 » Abụọ 24 Feb 2020, 05:21
Naanị ebudata nke a na ọ bụ ụgbọ elu mara mma, mana nsogbu abụọ, mgbe ịdabere na ime ihe anaghị agbatịkwanu n'ụzọ ziri ezi na wiil ndị ahụ dị na akụkụ anaghị akpọchiri ya ozugbo, na mmetụ ụgbọ elu ahụ ụgbọ ala na-apụ n'anya n'okporo ụzọ awara awara. Ha bụ ndozi maka nsogbu abụọ a, ọ bụrụ na a sị ebe ahụ. Niile nyere ekele ekele.
Jikọtara: 30 Ọkt 2019, 21:11
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by joezei1 » Abụọ 28 Feb 2020, 14:29
I kwetaghị, kedu simulator ị na-eji. Echere m P3D4.
Enwere ike ibute nsogbu gị site na iji ihe adịghị mma maka simulator gị. (FS9 nlereanya na P3D wdg)
Gbalịa nbudata ụgbọ elu TDS 737 ndị ọzọ (dịka ọmụmaatụ na websaịtị m), ka ị hụ, ọ bụrụ na nsogbu ka dị.
Ọ bụrụ na ụgbọ elu si na websaịtị m enweghị nsogbu a, naanị kagbuo ihe ndeki na ihe ikuku na air.cfg site na ụgbọ elu m gaa nke gị.
Nke a bụ ebe nrụọrụ weebụ m: AIRMEDIA4YOU - Ndozi nke Joerg Zeitschelhttp: //www.adrastea.de
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Uchechi 38 » Abụọ 29 Feb 2020, 06:50
Ndewo, ọ mere maka ụgbọ elu ise nke mbụ wee mezie onwe ya, onweghị ihe mere, mana dịkwa mma ugbu a. O doro anya na ụfọdụ ụdị glitch mgbe ị na-ebugharị ụgbọ elu ahụ. Nnukwu nlereanya, hụ ya n'anya. Daalụ maka azịza anyị